Yobhi 19 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
19 Waza waphendula uYobhi wathi: 2 “Koda kube nini na niwucaphukisa umphefumlo wam+Nindityumza ngamazwi?+ 3 Ezi zihlandlo zilishumi nindikhalimela;Aninazintloni ukundiphatha ngqwabalala kangaka.+ 4 Yaye, ndiyavuma ndenze impazamo,+Iya kuhlala kum impazamo yam. 5 Ukuba enyanisweni nina niyazigwagwisa kum,+Yaye nindibonisa ukuba ukungcikivwa kwam kundifanele,+ 6 Yazini, ke ngoko, ukuba uThixo undilahlekisile,Yaye undivingcele ngomnatha wakhe wokuzingela.+ 7 Khangela! Ndiqhubeka ndidanduluka ndisithi, ‘Ugonyamelo!’ kodwa andifumani mpendulo;+Ndiyaqhubeka ndikhalela uncedo, kodwa akukho okusesikweni.+ 8 Umendo wam uwuthintele ngodonga lwamatye,+ yaye andinakudlula;Yaye ezindleleni zam ubeka ubumnyama.+ 9 Undihlubile uzuko lwam,+Yaye uyasisusa isithsaba sentloko yam. 10 Undidiliza macala onke, yaye ndiyemka;Ithemba lam ulincothula njengomthi. 11 Kwanomsindo wakhe uyavutha kum,+Yaye uqhubeka endibala njengotshaba lwakhe. 12 Ngokumanyeneyo abaphumi-mkhosi bakhe bafika bandibiyele,+Bamise inkampu bejikeleze intente yam. 13 Abantakwethu ubashenxisela kude nam,+Yaye abo bandaziyo bandilahlile. 14 Abo basenyongweni kum abasekho,+Nabo ndibaziyo bandilibele, 15 Abo bahlala endlwini yam njengabaphambukeli;+ namakhobokazana am andibalela kwabasemzini;Ndingowasemzini ngokwenene emehlweni abo. 16 Umkhonzi wam ndimbizile, kodwa akaphenduli.Ngomlomo wam ndiqhubeka ndicela ukuba abe nemfesane. 17 Impefumlo yam ilizothe emfazini wam,+Yaye ndinuka kakubi koonyana besisu sikama. 18 Kwanamakhwenkwana andigatyile;+Ndithi ndakuphakama, aqalise ukuthetha nxamnye nam. 19 Onke amadoda akwiqela lamakholwane am ayandicekisa,+Yaye lawo ndandiwathanda andijikele.+ 20 Amathambo am anamathele eluswini lwam nasenyameni yam,+Yaye ndisinda cebetshu. 21 Ndibabaleni, ndibabaleni, maqabane am,+Kuba isandla sikaThixo sindichukumisile.+ 22 Kutheni niqhubeka ninditshutshisa njengokuba uThixo esenza,+Ninganeliswa yinyama yam? 23 Owu akwaba amazwi am ebebhalwe phantsi!Owu akwaba ebebhalwe encwadini! 24 Ngosiba lwentsimbi+ nangelothe,Owu akwaba ebeqingqwe ngonaphakade elityeni! 25 Yaye mna ndiyazi kakuhle ukuba umkhululi wam+ uyaphila,Yaye nokuba, emva kwam, uya kuphakama+ phezu kothuli. 26 Yaye emva kolusu lwam, abaluhlinzileyo,—lwanje!Nangona ndincitshisiwe enyameni yam ndiya kumbona uThixo, 27 Kwanam endiya kuzibonela yena,+Namehlo am ngokuqinisekileyo aya kumbona, kodwa kungekhona owasemzini.Izintso zam ziphelelwe ngaphakathi kum. 28 Kuba nithi, ‘Kutheni siqhubeka simtshutshisa?’+Ngoxa eyona ngcambu yalo mcimbi ikum. 29 Zoyikeleni ngenxa yekrele,+Kuba ikrele lithetha umsindo nxamnye neziphoso,Ukuze nina nazi ukuba ukho umgwebi.”+